विप्लवको गाउँमा प्रहरीेको सर्च अभियान , ठूलो परिमाणमा हतियार बरामद गरेको दावी,प्रहरीले जबरजस्ती फसाउन खोजेको विप्लवको आरोप - City Post Daily
विप्लवको गाउँमा प्रहरीेको सर्च अभियान , ठूलो परिमाणमा हतियार बरामद गरेको दावी,प्रहरीले जबरजस्ती फसाउन खोजेको विप्लवको आरोप
काठमाडौंं, २४ फागुन । नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’को घरलाई लक्षित गर्दै प्रहरीले बिहीबार कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–९, सिम्बरी डाँडामा ९ घन्टा सर्च अभियान चलाएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता दुर्गाबहादुर रोकालाई पक्राउ गरिएको छ । रोकालाई खुट्टामा गोली हानेर पक्राउ गरेको हो ।उनको घरबाट प्रहरीले छापा मार्ने क्रममा एसएमजी २ थान, त्यसमा लाग्ने गोली ६८ राउण्ड, त्यसको म्यागजिन ३ थान, ५४ टाइप पेस्तोल १ थान, त्यसको म्यागजिन १ थान, गोली ३ राउण्ड, ५.५६ क्यालिभरको राउण्ड १ सय ३१ पिस, थप म्यागजिन १ थान र विभिन्न किसिमका तार तथा फलामका नटहरु १ बोरा (२५ केजी) बरामद गरिएको जनाएको छ । यसक्रममा त्यहाँ पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई सैन्य तालिम दिने गरिएको भेटिएको छ । छापा हान्ने काममा खटिएका सुरक्षा अधिकारीहरुका अनुसार अपरेसनका क्रममा ‘सैन्य शिविर’ लेखिएको ब्यानर फेला परेका छन् । ’प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभाग, प्रदेश ५ प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कपिलवस्तु लगायतको टोलीले विप्लवको गाउँलाई लक्षित गरेर सूचना संकलन गरिरहेको थियो । प्रहरीले छापा हान्ने क्रममा विप्लव कार्यकर्ताले ठूलो संख्यामा विद्यार्थीलाई सडकमा निकालेर अवरोध गर्ने कोशिश गरेका थिए । यसक्रममा केही व्यक्ति त्यहाँबाट भागेको सुरक्षा अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रहरी अधिकारीहरुले गाउँमा हतियार अझै लुकाइएको हुनसक्ने आशंका गरेका छन् । यसअघि फागुन २२ गते बेलुकादेखि नै सशस्त्र प्रहरी सहितको टोलीले घर घरमा पसी खानतलास गरी जनतालाई धम्काउने गरिराखेको थियो । पछिल्लोक्रममा प्रहरीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेतारकार्यकर्ता, समर्थक शुभचिन्तकहरुलाई गिरफ्तार गर्ने मुद्दा लगाउने गरिराखेको छ । यसैगरी रोल्पामा पनि जनताका घरघर पसी खानतलासी गर्ने, पिट्ने, धम्काउने गरिराखेको छ । यसबाट २०५२ सालमा तत्कालिन शेरबहादुर देउवाको सरकारले चलाएको नरसंहारकारी रोमियो अप्रेशनको झल्को केपी सरकारले दिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आरोप लगाएको छ ।
यसैगरी कपिलबस्तुको शिवगढीमा प्रहरीले अप्रशेन गरेर आफ्ना कार्यकर्तामाथि गोली चलाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनाएको छ ।नेकपा लुम्बिनी ब्यूरोले प्रहरीले बरामद गरेको हतियार आफ्नो नभएको समेत बताएको छ । प्रहरीले आफ्नो हतियार जबरजस्ती थमाएर फसाउने षड्यन्त्र गरेको बताएको छ ।नेकपा लुम्बिनी ब्यूरो इन्चार्ज वीरजंगले विहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर दुर्गाबहादुर रोकाको घरमा भेटिएको भनिएको हतियार पार्टीको नभएको बताएका छन् । सुतिरहेको बेला रोकालाई गिरफ्तार गरेर बीच बाटोमा हतियार थाइदिएर प्रहरीले गोली हानेको वीरजंगले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।“स्थानीय दुर्गाबहादुर रोकालाई आफ्नै घरमा सुतिरहेको अवस्थामा प्रहरीले गरिफ्तार गरी बीच बाटोमा जबरजस्त हतियार थामाईदिइ प्रहरीबाट नै उनको खुट्टामा गोली हानी घाइते बाएको छ,” विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, “रोकाको घरमा भेटिएको भनिएको उक्त हतियार पार्टीको नभएको जानकारी गराउदछौं । र यो घटना प्रहरीले आफ्नो हतियार जबरजस्त धमाई षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट फसाउने कुनियतबाट प्रेरित रहेको स्पष्ट गर्न चाहन्छौं ।” उनले घाइते रोकाको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै रिहाईको अपील गरेका छन् । इन्चार्ज विरजंगले सर्वसाधारणलाई षड्यन्त्रमूलक फसाउने प्रपञ्च भएको बताउँदै खारेज गर्न चेतावनी दिएका छन् । त्यसैगरी भगवानपुर निमाविका प्रअ यादव चन्दको घरमा प्रहरीले जबरजस्ती खानतलासी गर्न खोज्दा विद्यार्थी र स्थानीयले प्रतिरोध गरेको समेत विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।
यता राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको भनाई यस्तो रहेको छ । सरकारले राम्रा काम, जनमुखी कामहरू गर्दै गयो भने विप्लव समूह होस् वा अरू कुनै समूहको आकर्षण कम हुँदै हुँदै जाने हो । सरकारले एकपछि अर्को अलोकप्रिय काम गर्दै जाने, जनताको मन जित्न नसक्ने हो भने विप्लवलाई जति चेतावनी दिए पनि विप्लवहरूको आकर्षक बढ्दै जान्छ । भरपर्ने भनेको सरकारको काममा हो । कुनै चेतावनीले वा ‘मिलिट्री अपरेसन’ले हल हुने कुरा होइन । विगतमा शेरबहादुर देउवाले पनि चेतावनी दिएकै हुन् । राज्यले किलोसेरा टु पनि चलायो । रोमियो पनि चलाएकै हो तर माओवादी किन अगाडि बढ्यो ? त्यसकारण अहिलेको समस्या प्रशासनिक समस्या होइन । यो राजनीतिक समस्या हो । विगतमा पनि माओवादीलाई आतङ्ककारी भनेकै हो । माओवादीले हतियार समात्यो, अहिले उसैले विप्लवलाई आतङ्ककारी भन्दैछ । सरकार अहिले जसरी प्रस्तुत भएको छ, त्यसले भविष्यमा टकराव झन् बढ्ने देखिन्छ । अब विस्तारै विप्लवहरू गतिविधि बढाएर ‘मिलिट्री मोबिलाइजेसन’मा आउँछन् । सेना बनाएको भनेर विप्लवले बोलिसकेका छन् । अब उनीहरू मिल्ट्री मोबिलाइजेसनमा जाँदा अनावश्यक सर्वसाधारण मारिने कुरा हुन्छ । त्यहाँ विद्रोहीभन्दा सर्वसाधारण मारिन्छन् । त्यसपछि झन् विद्रोहीप्रति आकर्षण बढ्छ । पहिला माओवादीमा पनि त्यही भएको हो । चार जना मारिएका मध्य ३ जना सर्वसाधारण एक जना विद्रोही मारिए । अहिले त्यो भूल फेरि दोहोरिने देखिँदैछ । हिजो जहाँ जुन ढुङ्गामा ठेस लागेको थियो, अहिले फेरि त्यही ढुङ्गामा ठेस लाग्ने सम्भावना देखिँदैछ । त्यसकारण सरकारले त्यसलाई प्रशासनिक समस्या मानेर आतङ्ककारी भन्दैमा कुनै फाइदा गर्नेवाला छैन । किन विप्लव समूह बलियो हुँदैछ ? किन सेना बनाउँदै छ भनेर पो सरकारले हेर्नुपर्छ । त्यो हेर्ने हो भने सरकारले आफ्नो गतिविधिमा सुधार गर्नुपर्यो । जनताको मन जित्ने काम गर्नुपर्यो । सरकारले मन जित्दैन भने अर्कोले जित्छ ।
सिके राउतलाई सरकारी सुरक्षागार्ड